Izikhokelo Zamalungu akwa-Oxford Dict... | Oxford isiXhosa Living Dictionaries
Ikhaya Izikhokelo Zamalungu akwa-Oxford Dictionaries
Izikhokelo Zamalungu akwa-Oxford Dictionaries
Wamkelekile kwa-Oxford Dictionaries, indawo yakho yokuba negalelo ekuyileni amancedo olwimi ngokudithali, yabelana ngoluvo neembono zakho kunye nabanye abathandi bolwimi, uze ufumane iimpendulo kwimibuzo yakho.
Malunga ne-Oxford Dictionaries
Siyakukhuthaza ukuba ufake izinto neenguqulelo ezintsha zokwakha isichazi-magama esiphilayo solwimi lwakho. Ungabuza imibuzo malunga namagama neenguqulelo, uze uphendule imibuzo efakiweyo. Ungancokola ngeembono zakho ngolwimi namagama, uze ucele uluvo lwabanye.
UmPhathi woLwimi ngumphathi wabahlali noyena mntu unokumqhagamshela. Bakho ukuze baxhase ukuphuhliswa kwamancedo olwimi baze baqiniseke ukuba igalelo namagqabaza avumelana nezikhokelo ezichazwe apha.
Nceda uphawule ukuba umPhathi woLwimi akanakuyiphendula imibuzo emalunga nesiqulatho neenkonzo ezikhoyo kwisayithi ye-Oxford Dictionaries ngokupheleleyo. Ukuba unombuzo malunga nemveliso ye-Oxford Dictionaries okanye umrhumo, okanye umbuzo malunga nento efakwe kwisichazi-magama sethu, nceda utyelele Amaphepha oncedo (nceda uphawule: esi siqulatho singesiNgesi).
Ngokusebenzisa le webhusayithi ethi oxforddictionaries.com (“Iwebhusayithi”) uyavuma ukuthobela ezi ziKhokelo kunye nePolisi yaBucala kunye nesiLumkiso soMthetho esichaza imimiselo yokhuseleko lwenkcazelo eqhelekileyo, amalungelo eendaba ze-Oxford Yunivesithi okusebenzisa izinto ezenziwe ngumsebenzisi nokusetyenziswa okungakhethiyo kwesayithi. Ukuba ufuna olu xwebhu lube ngolwimi olwahlukileyo, nceda usiqhagamshele.
Siyalamkela igalelo elisuka nakubani na. Oku kuziphatha kulandelayo akuyi kwamkeleka kulo naluphi uhlobo lwento efakwayo, igqabaza, okanye igalelo kwiwebhusayithi:
Nakuphi ukuziphatha kwamanye amalungu okanye kweendwendwe kwiWebhusayithi (kunye needomeyini zayo ezingaphantsi) okunokugqalwa kundlongondlongo okanye kuxhaphaza.
Ukusetyenziswa kolwimi olukrwada okanye oluthukayo (ngaphandle komongo okwincoko yesifundo esiphathelele ulwimi olunjalo).
Naziphi izinto ezifakwayo ezithengiswayo, zentengiso, izibhengezo, okanye iimveliso ezithengiswayo neenkonzo (ngaphandle koncomelo olukhethekileyo olucelwe lelinye ilungu).
Ukuthuka (“ukufaka okusisithuko okanye okuvusa uqhushululu kwi-intanethi ngenjongo yokucaphukisa omnye umntu okanye ukubenza babe nentsabelo enomsindo”).
Imixholo enganxulumenanga nolwimi namagama.
Izinto ezingekho mthethweni, ezisongelayo, ezithukayo, ezinyelisayo, ezihlebayo, ezikrwada, ezingamanyala, ezixokayo, ezilahlekisayo, ezenzelwe ukulahlekisa, ezineengcaciso yezesondo okanye eziphandle kakhulu okanye ezibonisa izenzo zesondo (kuquka kodwa ezingaphelelanga kulwimi lwezesondo olunobundlobongela okanye olusongela omnye umntu okanye iqela labantu), ezixhokonkxa ubucala bomnye umntu okanye ezenzondo.
Izinto eziqulethe okanye ezikhuthaza ukuziphatha okunokubangela ulwaphulo mthetho okanye ezinokuphazamisana nomthetho.
Izinto ezinentsholongwane, iisoftwe ezingagunyaziswanga, okanye ezinye iikhomponenti eziyingozi, naluphi uhlobo lwezentengiso, okanye imbonakaliso ebonisa ukulahlekisa okanye izenzo ezingenziwayo.
Ebubuxoki bangabom okanye inkcazelo elahlekisayo.
Izinto ezikhuselwe ngamalungelo okukopa, okanye elinye ilungelo lepropati okanye lepropati engamaxwebhu, ngaphandle kokuqala ufumane imvume yomnini okanye umphathi wamalungelo epropati engamaxwebhu.
Nayiphi inkcazelo entununtunu, yobuqu, yomnini okanye eyimfihlo ngokuphathelele wena okanye abanye kumagqabaza akho.
Sinelungelo lokuqwalasela zonke izinto ezifakwa kwiWebhusayithi ezingqubana nezi zikhokelo; ngenxa yoko, ezinye zezinto ezifakwayo zingathunyelwa kulinganiselo ngaphambi kokuba zipapashwe ibe, ngenxa yoko, kungakho ulibaziseko ekuveleni kwalonto ifakwe kwiWebhusayithi.
Sinelungelo lokubhloka ngaphandle kwesilumkiso okanye ingxoxo namphi umsebenzisi ongazithobeliyo ezi zikhokelo, size sizisuse zonke izinto zakhe nogalelo aye walufaka.
Siyacela ukuba unganikeli inkcazelo yobuxoki ngawe kwiprofayile yakho. Yipolisi yakwa-Oxford Dictionaries ukuba amalungu anxibelelane nabanye esebenzisa amagama abo okwenene, ngenxa yezizathu zokuphenduliswa nokungafihli nto.
Izinto ezifakwe ngabasebenzisi ziza kuvezwa njenge‘zegalelo lomsebenzisi’, yaye ziza kuhlolwa ngabanye abasebenzisi be-Oxford Dictionaries okanye ngaphakathi ngu-OUP.